About Us - Shaoxing Baite qabriga maryo Co., Ltd.
Kuwa aan nahay:
Shaoxing Baite qabriga maryo CO., LTD waxa uu ku yaalaa Shaoxing Xarafka hore magaalada dunida caan ku tahay dhar, Shiinaha, oo diiradda saaraya samaynta kala duwan oo dhar ciidan iyo dharka u Army, Booliska iyo Dowladda Departments of Bariga Dhexe, Russia, Europe, koonfur bari Asia, America iyo Africa.
Maxaa la samayn karaa:
Waxaan leenahay waayo-aragnimo ka badan 10 sano in industry ilaaliya ciidamada iyo workwear iyo sidoo kale wax soo saarka ballaaran aqoon in dhammaan waxyaabaha aan qaadashada. Sidaa darteed, waxa aanu ku siin alaabta oo tayo leh oo ay la socdaan adeegga macaamiisha wargelin ah in kor loo qaado wacyi-aad waxa aan siin iyo alaabooyinka safety.Our adiga kuu gaar ah waa kala duwan oo kala duwan, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhar daboolid, dhar dhogor idaad ah uniform, difaan workwear, dharka ciidanka, dagaal suunka, cap, kabaha, T-shirt iyo jaakadaha.
hubinta tayada - Our warshad soo bandhigay dyeing sare iyo qalabka daabacaadda, laboratories iyo farsamo u gaar ah oo ay lagula socdaa talaabo kasta oo wax soo saarka ee waqtiga dhabta ah, waaxda QC sameeyey Kormeerida finalka, kaas oo ku hayn karaa waxyaabaha our mar walba maray shuruudaha imtixaanka ka Dalalka kala duwan iman ' Army.
Faa'iidada Price - Shirkadda Our ku yaalla Shaoxing, magaalada caalami ah caan ku textile.There yihiin dhar iyo dyeing warshadood oo aad u tiro badan greige halkan, waxaan qiimo jaban oo ka alaabta ceeriin in ay wax soo saarka dhammeeyayna ay ka heli karaan.
Payment dabacsan - gooni T / T iyo L / bixinta C, waxaan sidoo kale soo dhaweyn lacag ka si Trade Hubinta dhex Alibaba.It ilaalin kara ammaanka lacag iibsadaha ee.
Traffic haboon - magaalada Our aad ugu dhow in ay Dekadda Ningbo iyo Shanghai, ay sidoo kale u dhow inay Airport Hangzhou, taas oo xaqiijin karaa bixinta badeecada si ay bakhaar iibsadaha ee degdeg ah iyo in waqti.
Waxaan mar walba ku eekaan ruuxa "Tayada ugu horeysay, Karti ugu horeysay, Adeegga ugu horeysay" tan iyo bilowgii ilaa end.We ah si daacad ah oo soo dhaweysay booqashada iyo baaritaan ka macaamiisha kasta oo aduunka ka.